Video: Legendary Journey, Emperor Myanmar Music Concert, Singapore | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: Legendary Journey, Emperor Myanmar Music Concert, Singapore
Here is the video of “Legendary Journey” Myanmar Music Concert was held on May 1, 2011 (National Labour Day) at D'Maquee Indoor Theater in Singapore. Myanmar famous band “Emperor” led this concert and Myanmar famous rocker Zaw Win Htut performed for this concert together with other popular singers; A Thin Cho Swe, L Seng Zi, Wyne Su Khine Thein, Sai Sai Kham Hlaing, She, Chit Thu Wai and Chan Chan. This is one of the best Myanmar Music Concert which has been shown in before. Let's Enjoy the Show together...
မေလ (၁) ရက်နေ့က စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ “Legendary Journey” ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ
Download Mp4 File!
kimMay 2, 2011 at 8:18 PMချစ်သူ.ဝေ အရမ်းလှတယ်ဗျားးးReplyDeletekoMay 3, 2011 at 4:22 AMဟုတ်တယ်..ချစ်သုဝေ..အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်...အာာာဘွားးချစ်သုဝေReplyDeletezzawgyiMay 3, 2011 at 4:59 PMချမ်းချမ်းမင်းရဲ့သီချင်းအချိုမြိန်ဆုံးပဲ......ကြိုးစားထားနော်အမြဲတမ်းအားပေးနေပါ့မယ်ReplyDeletekyawMay 3, 2011 at 6:15 PMညီထွဋ်..... မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလန်းဆုံး ROCKER ....ReplyDeletesanMay 4, 2011 at 5:30 AMချစ်သုဝေး အရမ်းမိုက်တယ် အရမ်းချစ်တယ်ReplyDeleteTheinMay 4, 2011 at 6:28 AMThey are shamelessReplyDeletekuMay 4, 2011 at 7:23 AMချစ်သုဝေရဲ့ ..ဆိုဟန်လေးကအရမ်းလန်းတယ်..အမြဲတမ်းအားပေးနေမယ်...ReplyDeletemrs.losMay 4, 2011 at 8:55 AMi like chit thu waiReplyDeletewayyanMay 5, 2011 at 10:45 AMချစ်သုဝေ အချောဆုံးပဲ...။ReplyDeleteMyanmar Mathematics BlogMay 6, 2011 at 10:31 PMမော်တော်ဆိုင်ကယ် မစီးဘူးရှာသော မြန်မာပြည်က အဆိုတော်များReplyDeletekyaw kyawMay 7, 2011 at 11:12 PMမြန်မာပြည်က အဆိုတော်တွေလဲ သီချင်းတင်ကော်ပီကူးတာမဟုတ်ဘူး အဝတ်အစား ဒီဇိုင်းပါ အကုန်ကော်ပီကူးတာပဲ။မရှက်ကြဘူးလားဟာ။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုတာ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ လူပဲရှိတော့တယ်။ReplyDeleteboilianMay 14, 2011 at 11:29 AMကိုယ်မလုပ်နိုင်၇င်လဲ မနာလိုစိတ်ကိုတော မပြပါနဲReplyDeleteliMay 16, 2011 at 8:33 AMအဆိုတော်အားလုံး လှကြပါတယ် အားလုံးကို li wait ကအားပေးပါတယ်ReplyDeletezayarMay 18, 2011 at 1:08 AMပြောကုန်ကြပြီး mg ရေဘယ်ရောက်နေလဲ ပါလေရာကြီး လူအချင်းချင်းဖါးချင်းကင်းဝေးကြပါစေReplyDeleteAdd commentLoad more...